Android အတွက် Netflix Androidsis
Android အတွက် Netflix
el_iulius | | Android application များ
လူသိများတဲ့အက်ပ် စီးရီးနှင့်ရုပ်ရှင်အကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုရန်၎င်းသည်၎င်း၏ Android application ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဒီနှင့်အတူ, ကအားလုံးမျှော်လင့်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံ PC, mobile devices နှင့် console များသို့မဟုတ် smart TV နှစ်ခုစလုံးအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှ platform အားလုံးတွင်ပေါ်နေသည်။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်ပိုမိုအောင်မြင်မှုရရှိစေနိုင်သည်။
လျှောက်လွှာကိုမသိသောသူများအတွက်၊ Netflix သည်လစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်း (၈ ဒေါ်လာ) မှတစ်ဆင့်စီးရီးသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်များကဲ့သို့မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးရှိသော၎င်း၏အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းအားဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စာရင်းပေးသွင်းခြင်းဖြင့်သင်အလိုအလျောက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကန့်သတ်ချက်မရှိပဲအသုံးပြုနိုင်သည်။ ယခုသင် application ကိုစတင်ခြင်းဖြင့်သင့်တွင် Android ရှိပါက PC ရှေ့တွင်မရှိဘဲသင်အကြိုက်ဆုံးစီးရီးများကိုကြည့်ရှုရန်အခွင့်အရေးယူနိုင်သည်။
Android 2.2 ဖြင့် HTC Incredible
Android 2.2 နှင့် 2.3 ဖြင့် HTC Nexus One
Android4ဖြင့် HTC Evo 2.2G
Android2ဖြင့် HTC G2.2
Android 2.3 ဖြင့် Samsung Nexus S
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းသည်ဖုန်းအားလုံးတွင်အလုပ်မလုပ်ပါ။ သို့သော် Nexus နှင့်အတူ Desires နှင့်ချက်ပြုတ်ထားသော ROM များရှိအခြားဖုန်းများမှာသေချာသည်။
အခုတော့ငါသတင်းဆိုးရှိသည်။ Netflix သည် USA တွင်သာအလုပ်လုပ်သည်။ အမြဲလိုလိုဤ ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများကိုnotreaméricaတွင်သာရရှိနိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများ (အခြားကိစ္စရပ်များတွင်အသံဖမ်းကုမ္ပဏီများ၊ တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာများ) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဥရောပသို့ရောက်ရှိခြင်းနှင့်မတူပါ။ သူ့အားဤတွင်ထားရန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် "ခိုးကူးခွေမှုနာကျင်မှု" ကိုချစ်သူများအားစားပွဲကိုကောင်းကောင်းထိုးနှက်နိုင်စေရန် ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒေါ်လာ ၈ ဒေါ်လာပေးမယ် ပြီးတော့သင်? သင်ပေးလို့ရမလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android အတွက် Netflix
ငါပြားချပ်ချပ်နှုန်းအတွက်တစ်လ€ 8 ပေးဆောင်လိမ့်မယ် ... အကယ်စင်စစ်ဟုတ်ကဲ့။ သူတို့ကမ်းလှမ်းတဲ့အရာပေါ်မှာမူတည်တယ်။ ရိုးရိုးလေးပါ။ အခုဆိုရင်ကျွန်ုပ်သည် USA ပြီးနောက် ၂၄ နာရီမပြည့်ခင် 720p တွင် VOSE ကိုမြင်ချင်သောအရာတစ်ခုရှိသည်။ သူတို့အတူတူပေးရင်ငါပေးမယ်။ အခုသူတို့ပေးတဲ့ပုံအရည်အသွေးအတွက်ငါမပေးတော့ဘူး၊ ဆိုးတာကိုမမြင်ချင်ဘူး။ ထိုအပြီးသားခေါက်မဟုတ်သလိုငါထင်ကြဘူး။
8 $? ခဏမဆိုင်းမတွ
Netflix သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အစတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခွင့်ပြုထားသောတင်းကြပ်သောမူပိုင်ခွင့်မူဝါဒကိုအသုံးပြုပါကစပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်ဟုထင်ရသည်။ စပိန်သည်နည်းပညာဆိုင်ရာပထမဆုံးလက်ခံသောပထမဆုံးဥရောပနိုင်ငံဖြစ်သည်။
HTC Desire S (III) ကိုစမ်းသပ်ခြင်း \_ t
Abobe Flash 10.3: Android အတွက် Flash Player application ၏နောက်ဆုံးသတင်းများ